Shiinaha Warshad xabagta laba qaybood ah iyo alaab-qeybiyeyaal | DESAY
1. Waxyaabaha: wakiilka ugu weyn iyo saamiga wakiilka.
2. Muuqaal: dareere cad oo caano ah.
3. Waxay ku habboon tahay buuga gacanta, adkeysi adag, waxqabad sareeya, dhismo ku habboon.
4. Codsiga: Waxaa si ballaaran loogu isticmaalay albaabada looxa adag iyo Windows, alwaax adag oo alwaax ah, sagxad adag oo alwaax ah, looxyo adag oo adag, looxyo isku dhafan, alaabada alwaaxa isku xidha iyo wixii la mid ah.
Caddaymaha: 1L 、 5KG 、 10KG 、 25KG 、 50KG
Midabka bannaanka: Wakiilka ugu weyn (Ivory) Hardener (bunni khafiifa)
Waxyaabaha adag: Wakiilka ugu weyn （≥50%） Calool adag （≥99%）
(1) Daaweynta: isku dheelitirka maadada salka, xabagta, iyadoo loo eegayo saamiga wakiilka ugu weyn (caano caano leh) iyo wakiilka daweynta (bunni madow) 10: 1. Ku dheji koollada si siman, xabagta isku dhafanna waa in loo adeegsadaa 30 gudahood ~ 60 daqiiqo.
(2) cabbirka: cabiridda waa in lagu dhammaystiraa 1 daqiiqo, xabagta maradu waa mid isku mid ah dhammaadka xabagtana waa inay ku filnaataa.
(3) isku dhafan: waqtiga cadaadiska si uu kuugu filnaado, saxanka dahaarka leh ee 1 daqiiqo, 3 daqiiqo waa in la cadaadiyaa, waqtiga cadaadiska 45 ~ 120 daqiiqo, adag gaar ah 2 ~ 4 saacadood. Xoog cadaadiska waa inuu ku filnaadaa, guf 500 ~ 1000kg / m2 , dhir adag 800 ~ 15000kg / m2.
(4) Daaweynta kadib: cadaadiska ka dib si loo ilaaliyo caafimaadka, heerkulka caafimaadka ee ka sarreeya 20 ℃, 24 saacadood ayaa si fudud loo hawl gelin karaa (saw, qorsheeye), 72 saacadood ka dib qoto dheer howsha, inta lagu jiro mudada si looga fogaado iftiinka qoraxda iyo roobka qoyan.
Magaca badeecada: plywood plywood laba-qaybood
Nooca PVAC - PB
Midabka bannaanka waa caddaan caano ah
Viscosity (MPa · s) 5000-8000
Waqtiga daaweynta saacadaha 2-4
magaca sheyga Koolada laba qaybood ah Magaca sumadda deay
nooca PVAC-PB Nafwaayay（MPA.S) 5000-8000
Sooc 1L、5KG、10KG、25KG、50KG PH 5-6
Midabka bannaanka Wakiilka ugu weyn (Ivory) Hardener (bunni khafiifa) Waqtiga daaweynta 2-4h
Waxyaabaha adag Wakiilka ugu weyn（≥50%）Qalajiye（≥99%） Nolosha shelf 12 bilood
1 hes Isku dhejis adag
2 Biyo-celin wanaagsan
3 Xasilloonida dabiiciga
Waxay ku habboon tahay isku xirnaanta jigsaw ee qalabka aan dhismaha ahayn iyo qalabka dhismaha.
1, Pretreatment: Qoyaanka ku jira qoryaha waa in la xakameeyaa inta udhaxeysa 8-12%; dusha salka isku xidhka waa inuu ahaadaa mid siman oo fidsan, oo aan lahayn warpage, boodh, saliid, iwm.
2 、 Qiyaasta: wakiilka ugu weyn: daaweynta wakiilka (10: 1) isku darka saamiga wuxuu u baahan yahay inuu si buuxda u walaaqo 3-5 daqiiqo, illaa iyo inta leysku midaynayo. Ka dib marka xabagta la diyaariyo, waa in lagu isticmaalo 1-2 saacadood gudahood. Xumbada iyo balaadhinta mugga ayaa dhici kara inta lagu jiro isticmaalka, taas oo ah dhacdo caadi ah. Waad sii wadi kartaa inaad isticmaasho kadib walaaq yar.
3 、 Daweynta: Waqtiga cadaadintu waa guud ahaan 2-4 saacadood, iyadoo kuxiran heerkulka
iyo huurka deegaanka dhismaha.
1.Baseing leveling material waa furaha:
Heerka Flatness: ± 0.1mm Heerka cabirka biyaha: 8% -12%;
2. Saamiga xabagta ayaa aad muhiim u ah:
Wakiilka ugu weyn (cad) iyo wakiilka daweynta (mugdiga madoow) ayaa lagu qasi karaa saamiga 100: 10 marka loo eego saamiga u dhigma;
3. Ku dheji koolada si siman:
Isticmaal walaaqiyaha si aad ugu celceliso kolloid 3-5 jeer, adiga oo aan lahayn dareeraha buniga leh. Xalka isku dhafan ee xabagta waa in lagu isticmaalo 30-60 daqiiqo gudahood;
4. Xawaaraha arjiga koolladu waa mid dhakhso badan oo sax ah:
Codsiga xabagta waa in lagu dhammeeyaa 1 daqiiqo gudahood. Kooladu waa inay ahaataa mid isku mid ah oo xabagta dhamaadka waa inay ku filnaataa.
5. Waqtiga cadaadiska waa inuu kufilan yahay
Looxyada dahaarka leh ayaa la isku riixay 1 daqiiqo gudahood, waana in lagu cadaadiyo 3 daqiiqo gudahood. Waqtiga cadaadisku waa 45-120 daqiiqo, dhirta adagna waa 2-4 saacadood;
6, cadaadisku waa inuu ku filnaadaa:
Cadaadis: softwood 500-1000kg / ㎡ adag 800-15000kg / ㎡;
7, ka dib jahwareerka si loo ilaaliyo caafimaadka:
Heerkulka caafimaadku wuxuu ka sarreeyaa 20 ° C, si fudud ayaa loo farsameyn karaa (loo arki karaa, loo qorsheysan karaa) 24 saacadood, waxaana lagu sii wadi karaa 72 saacadood. Iska ilaali iftiinka qoraxda iyo roobka inta lagu jiro mudada;
Hore: Xabagta xabagta ee loo yaqaan 'Polyurethane'
Xiga: Terpene pinene wax xabagta xabagta xabagta
xabagta alwaaxda oo tayo sare leh
New Fashion Eedo Amniga uurka Muraayadaha Eye Protec ...
S168 Silicone Sealant Cimilada u adkaysta Adhesiv ...
Shiinaha qeybiyeyaasha maaskaro wejiga la tuuro 3 boodhka boodh ...
3 ply non-xidhka daab tolmiyo filter fa ilaaliyo ...
Super polyvinyl qaro weyn warqad khamri transp ...